Semalt Expert: Zvikonzero Zvokushandisa Google Analytics
Hazvibatsiri kana iwe uine nzvimbo yekugara kwemakore akawanda achishanda kana kwemazuva mashomanana, pane zvidimbu zviviri zvinokosha zveGoogle Analytics zvaunoda kushandisa. Zvikonzero zveizvi ndechekuvimbisa kuti mishumo inogadzirwa nguva dzose yakarurama, uye iwe ucharamba uine mararamiro anobatsira.
Chokutanga pane zvose, hapana kuzviremekedza mumabhizimusi wepaIndaneti ane nzvimbo inogona kuita pasina bhaibheri reGoogle Analytics iyo isingabhadhari uye iri nyore kuumba. Inofanira kunge inofanirwa kumabhizimisi ose, izvo zvinoita kuti munhu aine iyo yevanoshandisa mabhizimisi akachenjera zvikuru. Uyewo, semutongi, munhu haafaniri kukanganwa zvingasarudzwa nemutungamiri kuti ape mafiritsi. Vanhu vazhinji vanokanganwa kuti simba rekuumba iyo yakakosha uye yakatendesa data iri mumutambo weGoogle Analytics - giochi gonfiabili adulti.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt , anokupa kuti uzive zvinotevera mafiriji maviri anonyatsoita kuti ape mutsauko mukuru mukururamisa kwemitemo yemwedzi wega kubva kuGoogle Analytics.
Sezvambotaurwa, chinhu chimwe chekucherechedza ndechokutumira spam..Google Analytics inotarisa basa romuridzi wekusasa. Iyo inyaya isingabatsiri pakugadzirisa zvinhu zvakadai semapeji ekumusoro, iyo yakatendeuka kutengesa, nguva yakashandiswa panzvimbo iyi kana mapeji kuburikidza nekushanya. Nzira yakanakisisa yekugadzirisa dambudziko iri ndeyokuumba firiji inodzivirira kufamba kwose kunobva kune imwe nzvimbo kana rutivi rweakero ye IP. Kuti uite izvi, tora matanho anotevera:
Enda kune admin tab uye sarudza filtriti;
Ita firiji itsva "+ New Filter";
Zita iyo firiji itsva;
Iva nechokwadi chekutarisa bhokisi rekufananidza firiji;
Sarudza kubvisa chitima kubva paIndaneti;
Nhanho inotevera ndeyokuisa iyo kero chaiyo inoda kubvisa. Google "chii chinonzi IP" kuti ione ikozvino IP kero;
Mamwe makambani akangwarira zvikuru kuti atange magwaro matsva ewebsite dzavo. Pane kudaro, vanoba magwaro emitemo kubva kune dzimwe makambani uye vanovashandisa savo pachavo. Pasinei nokuti ichokwadi uye inonyadzisa, ichi chinhu chavanoshandisa mabhizimisi nguva nenguva. Zviito zvakadaro zvinogona kukanganisa ruzivo rwemigwagwa yewebsite kubva kune dzimwe dzekambani idzi dzinotora chikamu mukudengenyeka kukanganwa kubvisa script yeGoogle Analytics kubva pikorodhe. Pakupedzisira, zvose mutengesi kubva kumudzidzi wekutanga uye imwe ikambani inobatanidza uye inosanganisa nhamba yemigwagwa. Nzira chete yekugadzirisa kukanganisa kwakadaro ndeyekuisa firiji inogamuchira chete magwagwa anobva kumunda wekambani. Heino nzira yekuita nayo izvi:
Kusvikira pakatarisa munhu kuti aongorore zvakatemerwa fileri bhokisi, anosarudza kuisa chete motokari kune zita re hostname rine mudziyo wega chete;